Rivaldo oo ka hadlay saxiixa cusub ee United Fred – Radio Muqdisho
Halyeeyga reer Brazil ee Rivaldo ayaa arrin wanaagsan ku tilmaamay go’aanka xiddiga Fred uu ku doortay kooxda kubadda cagta Manchester United ee ka dhisan horyaalka Ingiriiska.
25-sanno jirka ka dheello khadka dhexe ayaa ka mid ahaa ciyaartooyda Brazil u mataleyso cayaaraha koobka adduunka ee sagaal maalin kaddib ka bilaaban doonno Ruush-ka.
Rivaldo, ayaa ku guulleeystay koobka adduunka sannadkii 2002, waxanna uu rummeysan yahay in Fred uu saameyn muuqato ku yeellan doonno kooxdiisa cusub.
“Isaga waa ciyaaryahan cajiib ah, Dal cusub ayuu tagay waxa uu u baahan yahay inuu la qabsado, waa nin ku wanaagsan ka ciyaarista khadka dhexe.” 46-sanno jirka Rivaldo ayaa warkan u sheegay Sky Sports News.
Fred, ayaa beddel ku soo galay cayaar Axadii garoonka Anfield ku dhexmartay qaranka Brazil iyo Croatia, waxaanna u suurogashay inay ku adkaadaan 2-0.
Wasiirka iyo Wasiir ku xigeenka Warfaafinta oo la kulmay Shaqaalaha Wasaaradda “SAWIRRO”